Ka hor inta raadinayaa shaqo, hal shay oo ah in qof walba guud ahaan aragto waa lacag ama mushaarka. Haa, hamiday waa waxa ay keenaysaa in ay guul laakiin dhamaadka maalinta, marka aad dib daal tago, oo dhan waxaad u baahan tahay waa qaar ka mid raaxo iyo raaxo. Sidaas, waxaa had iyo jeer ka fiican in meel aad gool at height weyn halkaas oo aad awoodi kartaa dhammaan qalabka gargaarka oo halkii dejinta gool yar. Waxaa jira shaqooyin gaar ah in la timid wax badan oo abaalmarinno la socdaan mushaarka. Following is a list of some of the top career options that would support you efficiently both financially and prestige wise.
In ka ab ka ganacsiga hadda, sumcad sare ayaa la dhisay, waayo, dadka maamulka iyo multitasking xirfadaha. Ma aha safar aad ka farxiya heer kadinka. Si kastaba ha ahaatee, marka aad tuureyso kor u qaado xilalka sare iyo geedi socodka go'aan qaadashada, mushaaraadka la adkeeyay. All aad u baahan tahay waa degree maamulka ka machadka a si fiican u yaqaan a. Tani waa sida ay baananku hadda lacag ee bulk. Shirkadaha ayaa sidoo kale tegi on si ay kuu siiyaan abaalmarinno kala duwan oo ay la socdaan mushaharkaaga.
Dhakhaatiirta waxaa looga baahan yahay in dhamaan noocyada xaaladaha degdegga ah iyo xirfad waa qiimo sare ee bulshada. Marka aad addoonsada Medicine, aad ka hor tegi karin inuu ku soo bilowdo rugta gaarka ah u gaar ah halkaas oo lacagta tashiga ka soo baxaysa in tiro aad u badan. In dhakhtar ma aha oo kaliya aad u gura lacag, laakiin waxa kale oo aad ku abaal leh wax badan oo sumcad ku leh bulshada. xirfadlayaasha caafimaad waxaa ka mid ah qaybaha kala duwan, tusaale ahaan, ilkaha, Dhakhaatiirta Indhaha iwm.
warshadaha IT ayaa hadda dhacyaan. Iyadoo technology bedelay hawl kasta oo ay gacanta ku, xal IT yihiin in baahida weyn. Waxaa jira wax badan oo ku tiirsanaanta codsiyada software iyo computer ku salaysan maalmahan. Sidaas, waxaa jira wax badan oo fursad ay u helaan lacag hal mar ah.
Chartered Xisaabaadka iyo CFAs
Xisaabaadka waa element muhiim ah in shirkad kasta oo. Waxaad lacag ugu badan ee aad dalban sida ay tahay mid ka mid ah shuruudaha muhiimka ah ee urur. Si aad buugaagta ay dhawrsan, hanti dhowrka ayaa loo baahan yahay oo ah qaybta ugu weyn ee nidaamka qorshaynta yahay qorshaynta maaliyadeed ee sannadlaha ah. Sidaa awgeed, CAS iyo CFAs leeyihiin baaxadda weyn ee warshadaha.
heshiisyo Business lingaxan yihiin meelo kala duwan, taas oo ah sababta loo baahan yahay in labada ganacsatada iyo dadka caadiga ah in ay marar badan u soo duuli. Waxay diyaar u ah inay qaataan tiro aad u badan oo ku saabsan duulimaadyada ay yihiin. qaybta airline ayaa u kordhaysa xawaare ah aan la rumaysan karin. Sidaas, duuliyayaasha, midiidinnadiisa duulimaadka, shaqaalaha dhulka, hostesses hawada iwm waa in baahida.
Entertainment waa warshadaha kaas on top iyo ka qeyb heshiis weyn dhaqaalaha oo dhan. The heshiisyo warshadaha soo jiidashada leh tiro la yaab leh iyo xirfadlayaasha sida jilayaasha, daydo, fanaaniinta Khayrbadan heshiis weyn oo xoolo laga reebo kaalintooda in industry ee dhex commercials. Mar bay u banneeyeen ah naftooda, cirku waa ay xaddidan.
Iyada oo xaaladaha aad u badan ku raco, Qareenada ayaa sidoo kale laga rabey. Sharciga waa beer, taas oo haddii aad dooratid hab sax ah oo ku eekaan mabaadi'da aad, aad aakhirka ku muteystay Xoolo iyo qanacsanaanta labada. Waxaa jira jeer marka aad la dhumiyeen. Lahaanshaha inay wax ka qaban adag tahay. Si kastaba ha ahaatee, aad abaal sharaf, faa'iidooyinka iyo lacag dhamaadka maalinta.
Sports ma aha koob shaah ah qof walba. Laakiin haddii aad u tayo badan oo ay u bartaan xirfadaha ciyaaraha wanaagsan midig ka carruurnimada, waxa keliya ee aad leedahay in la sameeyo aqoonsi naftaada oo duurka ku. Ma aha shaqo fudud, si ay u noqoto qof daacad ah. laakiin, marka aad ka dhigi aqoonsigaaga duurka ku, aad lacag ma ahan oo keliya ka kulan aad u ciyaaro laakiin waxaa sidoo kale ka samaynaya commercials iyo xayeysiis kasban. Tani waxay sidoo kale keenaysaa in warkiisa hab aad u wanaagsan.
kor ku xusan waa hogaanka 8 fursadaha xirfadaha ee aad la barakaysan yihiin mushahar qaali ah iyo sumcad waqti isku mid ah. Si kastaba ha ahaatee, badan oo shaqo adag, furitaankii iyo soo socda waddada saxda ah ayaa loo baahan yahay.
« maalin Happy Australia 2018 Rajo, Quotes, SMS, Messages, Images, dharka
Warqad ku editor ah oo ku saabsan dhibaatooyinka jaridda biyaha inta lagu guda jiro xilli monsoon »